( ၆၅ ) နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ စာပေဟောပြောပွဲ နှင့် စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ကာတွန်းပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း | ဒီရေ
( ၆၅ ) နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ စာပေဟောပြောပွဲ နှင့် စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ကာတွန်းပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
( ၆၅ ) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ စာပေ ဟောပြောပွဲ နှင့် စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ကာတွန်း ပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း။
အာဇာနည်နေ့ စာပေဟောပြောပွဲ။ ။ ဆရာ မောင်သာချို၊ ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင်
စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ကာတွန်း ပြိုင်ပွဲ။ ။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အဆင့် ကျောင်းသားများ
နေ့စွဲ။ ။ ၁၈. ၇ . ၂၀၁၂
အချိန်။ ။ မွန်းလွဲ( ၁း၀၀ )နာရီ
နေရာ။ ။ အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်း
( ၅၄၈) မေခလမ်း( ၁၄ )ရပ်ကွက်